Ahoana ny fametrahana Ubuntu amin'ny terminal Android | Ubunlog
Ireo telefaona voalohany miaraka amin'ny Ubuntu Phone ho tanteraka ihany anio, saingy noho ny antony maro satria vao tonga ny maro amintsika dia tsy hanana fitaovana izay mihazakazaka ny rafitra fandidiana tahaka ny aseho androany. Na izany aza, ny azontsika atao raha mbola manana terminal Android mifanentana isika mametraka ROM ny rafitra ao amin'izy ireo.
Amin'ity toro-lalana ity izay hatolotray anao anio azonao atao mametraka Ubuntu Phone amin'ny Android-nao, fa alohan'ny hanaovanay izany dia manome soso-kevitra zavatra maromaro izahay: diniho ny lisitry ny fitaovana tohana ofisialy, an'ny fitaovana tohanan'ny vondrom-piarahamonina, araho ny dingana izay hasehonay anao tsara, manana kopian'ny backup amin'ny zava-drehetra ary hazavao tsara ny zavatra ataonao.
Voalohany indrindra dia tokony ho mazava fa ny torolàlana izay homenay anao dia natao manokana hametrahana ny ROM fitaovana manana fanohanana ofisialy. Raha tsy manana ny iray amin'ireo fitaovana ireo ianao dia tokony hiseho ao amin'ny lisitry ny terminal izay tohanan'ny vondrom-piarahamonina ilay torolàlana mifandraika amin'izany.
Ny zavatra iray tokony ho fantatrao dia ny fametrahana Ubuntu Phone dia hitaky ny fahaverezan'ny data avy amin'ny terminal anao, fa noho izany aorian'izay dia homenay fitaovana ianao hanamboarana kopia nomanin'izay rehetra anananao ao amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny baiko ADB.
1 Omano ny birao
1.1 ADB sy Fastboot fiheverana
2 Mitahiry backup Android
3 Manokatra ny bootloader
4 Mametraka telefaona Ubuntu
Omano ny birao
Voalohany indrindra dia tsy maintsy ataontsika izay hahazoana antoka fa manana ny tahiry Universe isika satria ny fonosana izay tsy maintsy apetrantsika dia hita ao anatiny. Raha vantany vao nahavita azy isika dia tsy maintsy aloha ampio ny Ubuntu SDK PPA. Manokatra terminal izahay ary manampy ity manaraka ity:
avy eo havaozy ny lisitry ny tahiry:
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia apetraho ny fonosana ubuntu-device-flash. Mba hanaovana izany ao amin'ny terminal dia manatanteraka ity baiko ity isika:
Hahafantatra bebe kokoa izay azontsika atao amin'ity fonosana ity azontsika atao foana mankanesa any amin'ny pejy lehilahy, amin'ny fanoratana ity manaraka ity ao amin'ny terminal:
Ity manaraka ity dia apetraho ny fonosana phablet-tools. Noho izany dia miverina any amin'ny terminal indray izahay:
Afaka mahazo a lisitry ny fitaovana tafiditra ao ao anatin'ity baiko ity:
Afaka mahazo isika fanampiana fitaovana avy amin'ity fonosana ity miaraka amin'ny mpanova -h, ohatra:
ADB sy Fastboot fiheverana
Rehefa mametraka ny fonosana ubuntu-device-flash fitaovana roa no ampiana izay hampiasaintsika betsaka amin'ity torolàlana ity: ADB sy Fastboot. ADB dia tetezana iray misy eo anelanelan'ny terminal sy ny solosaina ahafahantsika mihetsika amin'ny alàlan'ny terminal rehefa feno tanteraka ny booty, ary Fastboot dia manolotra fifandraisana USB rehefa nesorina ilay fitaovana avy amin'ny bootloader.
Manoro hevitra izahay jereo ireo pejy fanampiana amin'ireto singa roa ireto amin'ny fampiasana ireo baiko roa ireo hialana amin'ny fisalasalana araka izay tratra:
Mitahiry backup Android
izany azo atao amin'ny fomba roa: Raha efa manana ny bootloader voahidy ary a fanasitranana napetraka ianao dia afaka manao backup foana amin'ny famerenana izay azonao averina amin'ny laoniny amin'ny fomba mitovy. Raha tsy manana fitaovana fanarenana napetraka ianao dia tsy maintsy mankany amin'ny Android Settings aloha hampandeha ny maody fampandrosoana.
Ho an'ity ary raha mbola tsy nanao izany ianao dia tsy maintsy manao mandehana amin'ny fizarana Momba ny telefaona ary tsindrio matetika ny isa fananganana mandra-pahatongan'ny hafatra mitovy aminy !! Arahabaina !! Efa developer ianao!. Avy eo hiseho ny safidy fampivoarana, ary eo no ahafahanao mampandeha ny maody debugging USB.
Rehefa avy nampavitranao azy dia azonao atao mifandray amin'ny alàlan'ny tariby USB izany dia hanampy antsika hanangana ny tetezana ADB. Azonao atao ny manamarina fa nahomby ny fifandraisana tamin'ny alàlan'ny baiko ao amin'ny terminal izay tokony hamerina zavatra toy izao:
Raha vantany vao nahavita an'io isika, dia afaka miroso amin'ny mitahiry kopia voafafa ao amin'ny birao anay ny zavatra rehetra izay tafiditra ao amin'ny terminal Android anay, izay azontsika ampiasaina hamerenana amin'ny laoniny ny terminal misy antsika raha toa ka tsy maharesy lahatra antsika ny Ubuntu Phone. Eto ianao a fomba hamerenana amin'ny laoniny Android nomen'ny Canonical, fa mbola hanandrana hanokana torolàlana hafa ho azy izahay amin'ny fotoana manaraka.
Mba hamoronana backup dia tsy maintsy ataontsika mihazakazaha ity baiko manaraka ity Ao amin'ny terminal:
ny hafatra satria ny backup dia hamboarina amin'ny finday ary hanontany antsika raha te hanome fahefana azy isika. Eny hoy izahay.
Raha hametraka ROM misy anao, na ity avy any Ubuntu na iray fanao amin'ny Android toa an'i CyanogenMod, dia izy io mila sokafana ity entana ity. Mba hanaovana izany avy amin'ny terminal dia tsy maintsy averintsika indray ilay fitaovana ao amin'ny bootloader. Noho izany dia ampiasainay ity baiko manaraka ity:
Ho fantatsika fa ao amin'ny bootloader rehefa mahita sarin'ny a android mandry eo an-damosiny misokatra ny tontonana eo aloha. Aorian'izany dia jerentsika indray fa mifamatotra tsara ilay fitaovana, ary raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hahita output toa izao isika:
Ny zavatra manaraka dia ny fampiasana a baiko hamaha ny bootloader isaky ny:
Hahita takelaka misy ny fepetra sy fepetra tsy maintsy ekentsika izahay hanohizana. Zava-dehibe ny fahalalana fa raha manokatra ny bootloader ho very ny fiantohana amin'ny telefaona. Aorian'ity dia hiverina indray amin'ny Android isika, ho very ny angon-drakitra ary tsy maintsy hiditra ny fampahalalana farafaharatsiny mba hahavitana ny boot voalohany, satria rehefa apetrakao amin'ny Ubuntu dia ho very indray ireo data rehetra ireo.
Mametraka telefaona Ubuntu
Raha hametraka Ubuntu Phone aloha dia tsy maintsy vonoy ny fitaovana. Raha vantany vao vitantsika izany dia tsy maintsy manomboka indray isika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fanalahidy fanalahidy marina hanao azy amin'ny maody fastboot. Satria mampiasa ny fomba amin'ny alàlan'ny fitaovana tohana ofisialy izahay dia afaka miverina amin'ny torolàlana navoakan'i Google hanao izany amin'ny fomba tsara.
Ny zavatra manaraka dia ny fametrahana ny ROM, amin'izay tsy maintsy atao mifidy fantsona. Raha heverina, ohatra, fa mampiasa Nexus 7 ho an'ny fametrahana azy isika dia afaka mampiasa ilay fantsona serasera. Ho an'ity dia tsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny terminal ilay baiko ubuntu-device-flash, ary ny vokatra tokony ho azontsika dia toy izao:
Raha ny fantsona hisafidianana, Canonical dia nandefa a torolàlana momba ny safidy fantsona araka ny fitaovantsika, satria io no fomba tsy maintsy hamantarantsika ireo sary. Ity torolàlana ity dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Tranokala developer Ubuntu.
Rehefa vita ny fametrahana dia hiverina indray ny telefaona, ary alohan'ny hanaovana zavatra dia tsy maintsy miandry ianao vita indray ny famerenana. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy mila fifandraisan'ny mpampiasa izany, ary marihinay fa mety maharitra minitra vitsy izany. Mikasika ny fanavaozana ny rafitra, ny fampandrenesana ny fisian'izy ireo dia tokony ho tonga ho azy.
Ary hatreto dia ny mpitari-dalana antsika hametraka Ubuntu Phone amin'ny telefaona Android. Manararaotra an'io fotoana io izahay mba hanamafisana izany amin'ny alàlan'ity fomba fametrahana ity hesorinay tanteraka ny ROM Android; tsy a baoty roa. Mba hanaovana fametrahana boot roa dia hanamboatra torolàlana hafa izay havoakanay ao Ubunlog ihany koa.
Para mahazo fampahalalana bebe kokoa Mikasika ny fametrahana ny rafitra azonao aleha amin'ny torolàlana navoakan'ny Canonical.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » Ahoana ny fametrahana Ubuntu amin'ny terminal Android
fandroid dia hoy izy:
Ny torolàlana farany heveriko fa tsy marina: subuntu-device-flash –channel = devel –bootstrap
Mamaly an'i fandroid
Sergio Acute dia hoy izy:
Manitsy azy aho izao, misaotra amin'ny fidirana.
Valiny tamin'i Sergio Agudo
Azo apetraka amin'ny galaxy note 2 ve izy io? MISAOTRA
marco antonio dia hoy izy:
manao ahoana ny faharetan'ny telefaona ubuntu ankehitriny? manana rindranasa fototra toa ny whatsaap ve ianao? tarehy?
Mamaly an'i marco antonio
ny terminal tsy mahita ny fitaovana ataoko raha izany)
Luis Armando dia hoy izy:
inona no hitranga raha apetrako amin'ny lg lxx optimus izy satria tsy hita ao anaty lisitry ny telefaona
Valiny tamin'i Luis Armando
jesosy gonzalez dia hoy izy:
Salama inona no mitranga raha apetrako amin'ny htc faniriana 510 izay tsy ao anaty lisitra
Valio i jesosy gonzalez
KIKE MTZ dia hoy izy:
TSARA, misy mahalala ve raha afaka mametraka izany amin'ny IPHONE 4S-ko ?? AO amin'ny teoria dia tokony hiasa izy io satria samy manana ny UNIX CORE FA mieritreritra aho fa tsy misy ao anaty lisitra ny OPR: \_: \_ MBA VONDRO IZAO, TE HANANDRIANA TELEFONY UBUNTU aho.
Valiny amin'i KIKE MTZ
Mety hiasa amin'ny bq aquaris e4 ve izany?
edgart dia hoy izy:
Salama, azonao atao ve ny milaza amiko raha azoko apetraka amin'ny cdc htc evo 4g
Mamaly an'i edgart
anjely.volamena dia hoy izy:
Misy mahalala ve raha manohana gapp?
Mamaly an'i Angel.oro
jacoxta dia hoy izy:
azonao atao amin'ny cocktail pop iray mikasika (4.5
Mamaly an'i jacoxta
rodrigo spada dia hoy izy:
Salama, ny fanontaniako dia iza amin'ireo Samsung Galaxy no miasa.
Manana Samsung galaxy s3 mini I8190L aho, manana ondrilahy 1GB ary 5 fahatsiarovana anatiny.
Ity rafitra miasa ity dia ho tonga amin'ny fanarenana toy ny android.
Te hizaha toetra azy amin'ity finday ity aho ary iza no milaza fa Mini S3 voalohany manerantany miaraka amin'ny rafitra misy azy.
Mitadiava ireo toetra ankapobeny hahatonga ahy ho Rom azafady.
Tiako ny manokana ny telefaona finday.
Misaotra betsaka mialoha ary miandry ny valinteninao miaraka amin'ny torolàlana fametrahana tanteraka aho.
Veloma, mirary soa !!!!
Mamaly an'i rodrigo spada
ny baiko dia tsy manangona ahy
ny baiko sudo apt-mahazo mametraka ubuntu-fitaovana-flash
Steven galarza dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro Azo apetraka amin'ny moto g 2013
Valiny tamin'i Steven Galarza
Azo apetraka amin'ny Sony Xperiast21a
emilio valencia dia hoy izy:
Afaka apetraka amin'ny S3 Mini ve ny telefaona Ubuntu?
Mamaly an'i emilio valencia
Alayn Ravelo Ravelo dia hoy izy:
Afaka mametraka Ubuntu amin'ny finday Huawei Ascend Y221 aho
Valiny tamin'i Alayn Cuervo Ravelo
Azoko atao ny mametaka Ubuntu amin'ny SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY GRAND PRIME PLUS, ho tohanan'ny vondrom-piarahamonina na kanonika ve izany?
Valiny tamin'i Manuel Ramirez
jero dia hoy izy:
rahampitso tolakandro, misy mahalala ve raha ok no ilaiko manova ny takelaka (lenovo yoga plus 3) ho ubuntu? isaky ny manandrana miditra amin'ny faka aho dia mijanona ny fihetsika amin'ny fanomezana adb reboot bootloader raha manampy ahy amin'ny maha-ray aman-dreny azy ireo dia tsara kokoa izany satria manivana ny fampielezana rehetra ny ankizy, ary mianatra zavatra betsaka kokoa izy ireo, miala tsiny amin'ny fanelingelenana ary misaotra anao mialoha be
Mamaly an'i Deep
Walter Lacuadra dia hoy izy:
Ny takariva tsara dia azo tsapaina amin'ny Caterpillar S60 octa-core Snapdragon 617, ondrilahy 3gb
Valiny tamin'i Walter Lacuadra